Mudara raTinashe Muchuri: 2014
Nguva zhinji ndinosangana nedambudziko nevanondibvunza kuti pandinyora nyaya dziri mumabhuku angu ndinonyorera ani! Kubva pakutanga ndaingunoudza vanhu kuti ndinonyorera vaverengi vezvinyorwa zvangu. Tevere unonzwa zvonzi vaverengi vako ndivanaani? Unobva washaya kuziva chose kuti mubvunzo uyoyu wakanangei. Ndipo ndinoti jekesa mubvunzo tihwe kuti zvakamira sei? Unonzwa zvonzi unonyorera bhuku rako kuti ripinde pahurongwa hwezvidzidzo zvokuzvikoro here ini ndoti kwete. Ndinonyorera vaverengi. Vaverengi vako ndivanaani? Mubvunzo unotevera zvakare. Ndoti vose vanofarira kuverenga zvinyorwa ndivo vaverengi vangu.
Ndakaona chirwere chiri kuputira vanhu maererano nenyaya dzekunyora nekuverenga. Pfungwa dzedu dzakasungirirwa pakuti anonyora bvunzo ndiye anofanira kuverenga zvinyorwa. Iyeye chete ndiye anofanira kurava uvaranomwe kuti agone kupindura mibvunzo pabvunzo dzake. Paanokanda chinyoreso pasi achipedza kunyora bvunzo, kana nekuverenga kwapera. Uyu haasiye muverengi wangu. Haasi muverengi. Anoverengera uvaranomwe kukunda bvunzo haasi wangu. Chero ndikada kufamba naye haafambiki naye.
Chinyorwa chine chimiro nehunhu hwacho. Chinyorwa chinovaka ukama nemuverengi wacho zvokuti imwe yenguva nemutauro wake unobva wavakwa kubva muchinyogwa. Pfungwa dzemuverengi dzinoramba dzichidzokera kuchinyorwa muhurukuro dzakasiyana-siyana. Chinoita kuti muverengi apote achidzoka kuchinyorwa inyaya yekuti munyori akanyorera muverengi chaiye kwete uyu wekuda kukunda bvunzo.
Zvichida vaverengi vezvinyorwa ava vekukunda bvunzo vakavakwa nemurongerwo wakaitwa dzidzo yekuverenga zvinyorwa. Muverengi wekuda kukunda bvunzo anopiwa zvinyorwa zvakasarudzwa nevanofunga kuti izvi ndizvo zvinyorwa zvinokodzera kuverengwa navadzidzi. Kana chinyorwa chisina kumboverengwawo nevadzidzi chinoonekwa sechisina chimiro nehunhu kumuverengi nazizvozvo chinyorwa ichocho chakafumuka uye chinotarisirwa kusapa chouviri kumunyori.
Nehurongwa hwebvunzo uhu munyori anofanira kunyora chinyorwa chinofadza uyo anosarudza zvinyorwa zvinozoverengwa nevana kuti vagoshandisa pakupindura bvunzo. Hazvina kuipa. Zvakanakazve kana dai musarudzi aisarudza zvinyorwa izvi mushure mekunge munyori apuwa rusununguko rwekunyora zvaanoda akatambanuka. Zvino, nekuda kwekuti musarudzi anosarudza zvaanoda kuona muzvinyorwa, zvinyorwa zvizhinji zvave kuita sezvinonzi zvakanyorwa nemunhu mumwe chete. Izvozvi zvasakiswa nemusarudzi wezvinyorwa zvebvunzo anoda kuti zvikwanire muhurongwa hwake.
Vamwe vadhindi vezvinyorwa, kunyanya zvechiShona vava kutotanga vapa nhengo dzeboka revanosarudza zvinyorwa zvinozopinda muzvikoro kuti vapengenure zvinyorwa zvisati zvatsikiswa. Zvakare vamwe vevadhindi vezvinyorwa vave kumirira kuti chinyorwa chitange chasarudzwa kuti chipinde muhurongwa hwebazi redzidzo kuti vazochitsikisa. Singwi-singwi iripo yava yemari. Nyaya yakanyorwa haisisina kukosha.
Muverengi akanangwa ndiye uya ari kuchikoro. Iye wandinoti haasiye muverengi wandakananga. Ini ndakananga muverengi anoziva kuti chinyorwa chinoitwa hushamwari nacho kweupenyu hwese. Chinyorwa mwenje unovhenekera murima. Chinorwa ndiyo svumbunuro inovhura sasa masuwo ehupenyu, kuvaka hushamwari nekurongedzera hupenyu. Kushaya chinyorwa, kunopa iye asingaverengi nhamo yekugaroudzwa navamwe, kugarokurukwa nevanoverenga, kugaroreverwa nhema nevanoverenga. Handidi vakadayi.
Nhamo iyoyi yasakiswa nehurongwa hwedzidzo yenyika inovaka muverengi anovenga kuverenga zviya kana abuda mumba yekunyorera bvunzo. Iyeyi dzidziso yekuti tinokupai zvinyorwa zvinoita kuti muverengere bvunzo kwete zvinokutandadzai kuti mudzidze mukutandara nazvo ndiyovozve sakiso yaita kuti nyika ive nyika yavanhu vakaenda kuchikoro asi vasina kusvunura. Ndiyozve yaita kuti munhu wemunyika aone kuverenga sechombo chekukunda bvunzo kwete kuvandudza njere. Ane meso anoona ndiye anogaroverenga mazuva ose. Haanyengedzwi nenhema. Anogara ari muchokwadi. Ndiwe wangu muverengi. Ndiwe muverengi wangu. Paunoverenga zvinyorwa zvangu ziva ndiwe wandinoda kuti uverenge zvinyorwa izvi.
Muverengi wangu ndiye anoda kuverenga kubvira ari mudiki kusvika ava munhu mukuru. Iyeye anokurudzira vana kuverenga achivaratidza zvakakoshera kuverenga. Ndinoreva iwe unotova nenguva yekuverengera vana zvinyorwa. Iwe unototi kana pakambani yako panotovawo neimba yemabhuku ekuverenga uko vashandi vanopota vachikwereta kuti vawane uchenjeri nezivo iri muzvinyorwa. Kana pakambani pako pasina mabhuku ekurava, kambani iyoyo haina kwairi kuenda. Ichafa, ichatambudzika nekuti ruzivo rwavashandi harusi kukura. Vashandi havagoni kuva nenyaya dzakavandudzwa kana vasingaverengi. Havagoni kuva nemuono muhupenyu kana vasingaverengi. Havagoni kushanda vakatarira mberi kana vasingaverengi.
Muverengi wangu ari kubhanga, kumakambani emainishuwarenzi, muhotera, muhurumende, pamusika, mubhazi, mumugodhi, papurazi nepose panowanikwa munhu anotsvaka zivo nehuchenjeri. Anoziva kuti chinyorwa ndiyo jekero youpenyu ndiye wandinonyorera. Kana uyo webvunzo akasangana nechinyorwa zvakanaka asi handizvo zviri mundangariro pandinenge ndichinyora. Kunyorera munhu asingagoni kukurudzira vana vake, hama kana shamwari kuti dzitandare neni muzvinyorwa zvangu, hazviiti. Ini ndakananga iwe unoti kuverenga newe hamusiyani seinda netsvina.
Zvimwe zvinhu zvinofanira kumira
Chii chinopinda vanhu vanouya kuzoona mitambo yekuedzesera kumadopiro ezvemitambo yekuyedzesera? Zvinoreva here kuti vavazivi zvavavinga kuzoona kana kuti havazivi hunhu hunoenderana nekuona mitambo yekuyedzesera iyi? Pane zvisina kufamba zvakanaka paiita mutambo weudavadi weProtest Arts International Festival uyo wakaona zvikwata zvemitambo yekuyedzesera kubva kunyika dzakaita seMozambique, neZouth Africa zvakauya kuzoratidzira unyanzvi hwazvo.
Gift Cgakuvinga muna Inside my House
Pane avo vaiva mukati mevaive vachiona mitambo iyi vaiva bishi kuita ruzha, kudaira dzinhare, kufamba-famba apo mitambo yaive pakati pekuitwa. Zvinhu zvakadai zvinofanira kumira. Kumira chaiko nekuti kunyange zvazvo mitambo yacho ichionekwa nevanofarira mitambo iyi asina kubvisa mari, nguva yavo nechido chekuuya kuzoona mitambo zvinofanira kuremekedzwa. Kune dzimwe nzvimbo dzinoitwa mitambo imwe cheteyo dzisingaitwi ruzha kana kungofamba-famba vanhu vachipinda nekubuda chero nguva yavada.
Zvinhu zvakadai zvinofanira kumira. Kumira chaiko kuti vanhu vatange kukoshesa vadavadi nemwero wakakodzera pamwe nevamwe vaoni.
Ndinonzwa vanhu vachitaura zvakanyanya muupenyu maererano nezveudavadi. Chinopisa moyo kushaya hanya kwenyika nevadavadi vayo. Chinoogonekwa nenyika kupembedza vaya vanenge vagona kudavadika mukati megore nekuvapa mibairo yeNAMA (National Arts Merit Award) pagore rega-rega ravanenge vadavadika zvinotenza moyo. Asi izvi zvoga hazvina kukwana.
Vadavadi vanobaiwa moyo nekubirwa basa ravo namakoronyera masikati machena. Mabasa avadavadi anopiswa achitengeswa namakoronyera mumigwagwa yemaguta ose enyika yeZimbabwe. Nyika haina zvayo hanya nazvo. Inotoona zvakanaka kuti vanopisa mabasa avadavadi vararame nekuapisa. Mbavha dzinopisa mabasa avadavadi hadzina unoona. Nyika inoti zvakanaka kubatsira mbavha idzi kubira vadavadi pane kupa hupfumi kuvadavadi
Rimwe gore Alick Macheso akaimba nezveMurondatsimba. Vanhu vakapopota kuti anoreva Vamwe vaimbi vanoda kuimba kana kuridza zvakada kundotodza maridzire ake. Asi iye aive atambudzwa nembavha dzehudavadi hwake dzaimirira kuri iye arekodhe dzigobva dzamhanya kundopisa hudavadi hwake dzichihupa kunyika dzisina matyira nekuti nyika inozvifarira. Nyika inotunhidza mbavha idzi.
Suluman Chimbetu akazouyawo anetswa na Sean Timba uyo waakaona kuti iye arikuda kuti asaita kuti mhuri yake irarame. Timba anoda kuparadza hupfumi hwemudavadi nekumusona zuva nezuva. Kutora basa remudavadi achindopisa nekutengesera nyika. Nyika inotambira ichiti zvakainakira. Mbavha yapembedzwa munyika. Nyika inofarira mbavha.
Mabhuku azara mumugwagwa achitengeswa nembavha. Mimamhanzi yazara mumigwagwa ichitengeswa nembavha. Mafirimu azara mumigwagwa achitengeswa nembavha. Varidzi vehudavadi uhu vachisara vakabata maoko vasina cheuviri. Nguva zhinji tinonzwa zvichinzi vadavadi vafa vasina kana kobiri. Unozvibvunza kuti kobiri racho rinobvepi idzo mbavha dzichivabira zuva nezuva. Nyika yaita mbavha. Hutungamiri hwaita mbavha. Hapana musvinu munyika yazara mbavha.
Kana nyika ichisiya vaumbi vedzidzo, nhoroondo, utesve, vachibirwa udavadi hwavo zvinganzi here pane nyika? Nyika yaenda kumakororo. Nyika yamakororo. Kana mudavadi akaonekwa asina chekudya, pane kumuseka, zviseke iwe mbavha. Iwe uri kumubira nekutenga hudavadi hwake kubva kugororo. Unonakirwa nemumhanzi wekuba.
Nyika haisi kuzvitarira zvakadzama. Vana pavanodzidza nemabhuku akabiwa vanobva vadzidza kuba. Chinogara chichionekwa nemwana ndicho chaachaita muupenyu. Zvino zvavanoverenga mabhuku ekuba chii chavachadzidza kunze kwekuba? Dzidzo ndeyekuba saka dzidziso muzvikoro yava yekuba. Zvikoro zvava kubika mbavha. Zvichikonzerwa nenyika yashaya hanya nekukosha kweudavadi hwavadavadi. Huori haungaperi kana zvirizvo zvinodzidziswa vana?
Tiri kuvaka nyika here kana kuti tiri kuiputsa? Tiri kuitei nayo nyika? Uri kuitei nayo nyika? Nyika iri kuitei nevanhu vayo vakaikoshera? Kana vadavadi vakaramwa kuburitsa hudavadi hwavo nyika inozovei? Nguva zhinji unonzwa vanozviti vatsigiri vavadavadi vachipopota kuti vadavadi vavanonokera kuburitsa rimwe dambarefu, bhuku, kana firimu. Kuti vaburitse mugoba here? Vanoburitsa nei kana nyika ichibatsira mbavha kubira vadavadi? Handiti kuti muimbi arekodhe zvinotoda mari? Handiti kuti bhuku ritsikiswe zvinotoda mari? Handiti kuti firimu ribude zvinotoda mari?
Kana vadavadi vopemha mari dzekuzvipatara nedzekuvigwa nadzo nyika yovaseka ichiti marombe? Asakisa hurombe hwavo ndiyani? Handiti ndiyo nyika? Zvino inosekei, kana kusiri kuzviseka kusagona kuchengeta kwayo vanhu vakaikoshera.
ZIMA (Zimbabwe Music Awards) inogona kunge yaive isina kunyatsorongeka asi chinhu chayakagona kuva nemubairo unoonekwa. Vadavadi vanoda kuwana pokugara. Nyika yedu ine ivhu. Chiiwo chinoitadzisa kuti kuvadavadi vose vabudirira mumwaka uno ngavapiwe mastandi edzimba kuti vawane pekugara. Kana vawana pekugara vagogona kurapa nyika neudavadi hwavo vakasununguka? Chinokunda nyika chii kuti iite sekudaro? ZIMA yakaita chinhu chakanaka chine mucherechedzo wakanaka. Cde Chinx vava nepekugara. Havachanetseki nekuti kana ndaimbira nyika ndichadzoka ndichiisa musoro wangu pai? Kana ndaimbira nyika, mhuri yangu inorara pai?
Vadavadi ndivozve vanovaka hunhu netsika dzenyika. Zvino kana vava kungopopota nezvembavha dziri kuvabira hudavadi hwavo, nyika ichadzidzei? Kupopotedzana? Kupokana? Chii chinowana nyika kana vadavadi vakatsamwa? Chii chinowana nyika kana vadavadi vanova varapi venyika vakashatirwa kana vachichema? Misodzi?
Nyika inofanira kubatsira vadavadi kurwisa vana Murondatsimba nana Timba kuti vadavadi vararame kubva mukushanda kwavo. Kudavadi hakusi kutamba, ibasa. Ndiko kubasa kwavamwe zvakangofanana nekuva muhofisi kana mufakitori. Kuimba, ibasa. Kuveza, ibasa. Kunyora, ibasa. Basa ravadavadi rinofanira kuremekedza. Nyika ngairiremekedze iwane kufara.
Ndinogarofungisisa zvikuru nguva yose pandinonzwa vanhu vachitaura nezvekumusha. Hondo iri mudundundu mangu ndeyekuti vanonatsonzwisisa here nezvenyaya yeshoko rekumusha. Hongu kumusha izwi rinoreva zvizhinji.
Kumusha ndiko kuyaka kwakasara rukuvhute kune vamwe vazhinji vakabvako vachizoenda kundogara kumarimuka uko kwavakaenda kundoshava. Rukuvhute parunosiiwa nemambuya paya ndiko kunonzi kumusha. Unonzwa zvichinzi mwana abarwa zviya musarasa rukuvhute rwake Mbuya vake vasina kusvika. Zvine mwero wazvo nemuitirwo wazvo zvokurasa rukuvhute. Hongu mumadhorobha marukuvhute evamwe vana ava kudya kwehove dzemunzizi dzakatenderedza guta; mamwe ava kuraswa kurhabu remadhorobha sezvo vanamai vevana vachiakanda mudurunhuru kuti panouya vanamadhobhabhini vatakure vachienda nawo; mamwewo ndiwo ava kuiswa muzvimbuzi otakurwa nembombi dzinorasa tsvina. Nemisayano yemarasirwe erukuvhute zvinogona kunetsa kunzwisisa kuti kana zvichinzi kumusha ndiko kune rukuvhute zvinoreva chii? Asiwo vamwe vari mumadhorobha vanoti kana rwadonha vanoruchengeta vozonorurasa kumusha vachitevedzera dzidziso yavakuru vavo, kunyanyanya yambuya vemuzukuru.
Kumusha ndiko kuya kune dzinza remunhu, kunova ndiko kwakatangira dzinza kwarine umambo. Kazhinji kwaunonzwa uchibvunza munhu kuti unobvepi oti, “Ndinobva kuMalawi” asi iye akazvarirwa nekukurira muZimbabwe. Umwe unonzwa oti, ‘ndinobva kuChipinge asi takatamira kwaChivi’. Izvi zvinonongedza kuti kumusha ndiko kwakatanga rudzi kana kuti munhu kwaane dziko redzinza rake.
Kumusha kunoreva zvakare nzvimbo inonzi ndiyo inogarwa nemunhu nekusingaperi. Nzvimbo yekuti munhu anogona kubva kwairi achidzokera zvakare. Iyi nzvimbo inodaidzwa nekuti kumusha. Vamwe vangati mudhorobha ndimo mumusha mavo asi hapana kana zuva rimwe rakamboti munhu apedza kushanda basa kwava kuti, ‘vakomana kana vasikana toonana mangwana, regai ndimboenda kumusha’. Unonzwa achitaura nyaya yekuti, ‘regai tiende kudzimba’ kana kuti, ‘kumba’. Kureva kuti mudhorobha tinogara kumba asi hakusiko kumusha kwedu. Tine misha yedu. Misha yedu iri kunze kwedhorobha. Kunze kwedhorobha uko kunova ndiko kune dzinza redu.
Kumusha zvinoreva zvakare kuti ndiko kwatichagara nekusingaperi kana nguva yedu yekutandara pane rino dandaro yaguma. Uku ndiko kuya kunonzi bwiro, guva kana kuti rinda. Unonzwa vanhu vachibvunzana kuti, ‘ko musha wake uripi?’ Uku ndiko kumusha kwemunhu wese. Izvi zvakazoita kuti makare vamwe vazoimba kaiti, “Ndondovigwepi? Kambuzuma handidi, Ini ndoenda kumusha’. Tadzoka zvakare panyaya iya yekuti kumusha ndiko kwakabviwa munhu achiuya mudhorobha kuzoshava. Kunoshaviwa hakusi kumusha asi kune imba yekugara kwete kuzororo nekusingagumi.
Kuenda kumusha ndiko kuenda kunopota uchisora pachazova nemusha wako kana uchinge wazodzama. Zviya kana wadzama unonzwa veukama vachibvunzana kuti ko, ‘hapana akaudzwa kuti mufi akati anoda kuradzikwa papi here?’ Izvozvo vanenge vave kutsvaka pekukuradzika paya paunogara nekusingaperi. Kumusha kwako.
Mucherechedzo iwoyu wakakosha zvikuru wekumusha. Kana zviya magamba enyika ave kuda kuradzikwa unoona vachitanga vaendeswa kumusha kwavo. Hazvineyi kuti tumba twepamusha pacho twakaita sei? Vanoendwa navo kumusha kuti vandoenekana nevamwe vakatungamira kuti ini handisi kuzorara mumutunhu muno, ndichanorara uko kwandaishava ndiri. Asi zvakadaro vanenge vambosvika kumusha imwe nguva zvokutondosiyako hope.
Ndizvo zvinorovesa hana yangu pose pandinonzwa vanhu vachiti, ‘ndichamboenda kumusha, nokuti vamwe vacho havadzoki kuzotandara nesu vadzamira munzira vachienda kana vachidzoka kubva kumusha. Asizve nzira yekuenda kumusha hakuna anoziva painogumira.